Xisaabinta la taaban karo
Xisaabinta xaddiga sibidhka, ciid iyo quruurux samaynta la taaban karo
Inta ay la taaban karo E
bacaha sibidhka per 1 cubic meter M
Joogaba, la taaban karo
cement : ciid : dhagax la jajabiyey miisaan
Qiimaha qalabka dhismaha
cement (halkii kiish)
macluumaad ku saabsan xisaabinta ee qalabka la taaban karo
Sheeg saamiga looga baahan yahay.
E - lacagta loo baahan yahay ee la taaban karo. Waxaa la tilmaamay in mitir cubic.
M - Imisa bacaha sibidhka loo baahan yahay 1 mitir cubic of taaban karo.
K - Miisaanka uu leeyahay kolay cement. In kiiloogaraam.
Cadee qiimaha alaabta ee degaankaaga.
Ha iloobin in aad duulayaa sicirka alaabta bulk kharash miisaan, ma by mugga.
Joogaba, iyo isticmaalka cement, ciid iyo quruurux samaynta taaban karo saaraayo default ah waxaa la siiyaa tixraac, sida ay ku taliyeen saarayaasha of sibidhka.
Sidoo kale, qiimaha cement, ciid, quruurux kala duwanaan karaan si weyn gobollada kala duwan.
Halabuurka ee isku dar ah la dhammeeyayna ay la taaban karo waxay ku xiran tahay xajmiga (kooxaha) dhagax la jajabiyey ama quruurux, brand cement, ay u ageegi wiilal. Waxaa la og yahay in inta lagu guda jiro dheerayn cement kaydinta lumiyo hantida iyo tayada cement dilaacda dheeraad ah si degdeg ah ee qoyaan kacsantahay. Ogsoonow in bacaha sibidhka miisaami kara 50 kg ma jeceshay oo gudihiisa ku qornaa. Trust, laakiin xaqiijiyo. Intee in le'eg oo cement aad shubay jeeg ugu fiican.
Fadlan la soco in kharashka ciid iyo quruurux waxaa loo cayimay in barnaamijka 1 ton. Waratada sidoo kale ku dhawaaqay qiimo halkii mitir cubic of ciid ama dhagax la jajabiyey ama quruurux.
miisaan gaar ah oo ciid ku xidhan tahay in ay ka soo jeedo, tusaale ahaan, ciid webiga ka culus tahay xirfado.
Gravel iyo dhagax la jajabiyey. Sida laga soo xigtay ilo kala duwan 1 miisaanka mitir cubic bilaabo 1200 in 2500 kg ku xiran jajabka (size). Culus - in ka badan ganaax.
Sidaas xisaabo intay ku kacayso per ton oo ciid iyo quruurux waxaad yeelan doontaa adiga kuu gaar ah. Ama caddeeyo alaab ah.
Si kastaba ha ahaatee, xisaabinta weli ka caawisaa in ay ogaadaan qiimaha lagu qiyaasay dhismaha qalabka diyaarinta lacagta aad doonayo ee la taaban karo.